Maguire Miyuu Cayaari Doonaa Fiinaalka Europa League-ga? – Solskjaer Ayaa Ka Jawaabay – Garsoore Sports
Maguire Miyuu Cayaari…
Maguire Miyuu Cayaari Doonaa Fiinaalka Europa League-ga? – Solskjaer Ayaa Ka Jawaabay
Kooxda Red Devils ayaa haray labo kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan oo ay la cayaarayaan kooxaha Fulham iyo Wolverhampton Wanderers, kahor finalka Gdansk ka dhacaya ee Uefa Europa League ku wajahayaan naadiga Villareal.
Macalinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ugu yeeray cayaartoydiisa inay u dagaalamaan booskooda finalka Europa League ee kulamada ugu dambeeya ee xilli ciyaareedkan, waxaana uu rajo ka qabaa in kabtan Harry Maguire uu soo laaban doono.
Solskjaer ayaa sheegay in ay adagtahay in uu kala doorto kooxdiisa qeybta ka noqoneysa safka hore ee Fiinaalka, laakiin wuxuu ku rajo weyn yahay in uu dib u heli doono kabtan Maguire kaddib markii uu dhaawac ku seegay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka.
“Harry wuxuu noo ahaa hoggaamiyaheena, kabtankeena tan iyo markii uu soo galay sidaas darteed dabcan waan tabeeynaa waqtigaan laakiin waxaan rajeynayaa inuu soo dadajin doono soo kabashadiisa isla markaana uu diyaar u noqon doono kama-dambeysta. Waan siinayaa inta uu u baahan yahay illaa uu ka yiraahdo haa ama maya.”
“Horumar ayuu sameynayaa, laakiin waxaan si miyir qab ah u marnay wadadii soo kabashadiisa, ma dooneeyno inaan si si dhaqso leh u tijaabino isaga, sababtoo ah ma dooneyno inaan wax ka sii darno.”
”waad sameyn kartaa ilaa aad ka dhahdo ‘maya’. Marwalba waxaan ahaa qof rajo fiican leh, marka waan ku rajaweynahay inuu soo laabto fiinaalka. ”
TOOS U DAAWO: BARCELONA VS CELTA VIGO
TOOS U DAAWO: AC MILAN VS CAGLIARI